वस्ती बन्यो बगर | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / वस्ती बन्यो बगर
वस्ती बन्यो बगर
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार9days ago	0 10 Views
तुलसीपुर, तुुलसीपुर वसपार्कको छेउमै पर्छ पातुुखोला। जहा खोला भनेर पुलमा लेखिएको अक्षरले मात्रै चिनाउ“छ। हेर्दा वस्तीबीचको कुलो जस्तै देखिन्छ पातुखोला अहिले। अतिक्रमणको चरम चपेटामा परेको पातुुखोला अहिले नाममा मात्रै सीमित छ। न खोला, न खोलामा पानी बग्छ, बगरभरी वस्तीले भरिएको छ। जहा“ कतै साना छाप्रा त कतै ठूला–ठूला घर बनेका छन्। जसले खोलाको निसानी मात्रै देखाउछ। साउनको महिनामा नि अलिअलि पानी खोलामा बगेको छ। त्यो भन्दा बढी खोलामा न ढुुंगा छन्। न पानी छ। खोला घरघरैले भरिएको छ।
नापी कार्यालय तुलसीपुरका अनुुसार बसपार्क तुलसीपुर नेरको पातुखोला पुलको लम्वाई एकसय मिटर रहेको छ। पुलदेखि खोलाको उत्तरतिर दुुईसय मिटरमा खोलाको चौडाइ एकसय र तीनसय मिटरमा एकसय ५० मिटर चौडाइ छ भने पुलदेखि दुुईसय मिटर दक्षिणतर्फ दुुईसय र तीनसय मिटरमा एकसय ५० मिटर चौडाइ रहेको छ। तर हाल उक्त क्षेत्रमा २१ देखि ६० मिटरसम्म मात्रै खोलाको चौडाइरहेको जनाएको छ।
चरम अतिक्रमणपछिको वस्ती विकासले खोलालाई साघुरो बनाएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ का अध्यक्ष घनश्याम ढकालले बताउनुुभयो। उहा“ले वडा नंं. ९ मा मात्रै करिब तीनसय घर टहरा बगरमा निर्माण गरिएको बताउनुुभयो। जसले खोलालाई सानो बनाउ“दै लगेको उहा“को भनाइ छ। उहा“ले भन्नुुभयो– ‘पातुखोला अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। खोला अब होला कि नहोला भन्ने बेला भइसकेको छ।’
वडा नं. ९ मा भन्दा पनि खोला क्षेत्रको अतिक्रमण तुलसीपुर वडा नंं. ५ मा बढी भएको छ। बगरको वस्तीले खोला अतिक्रमणमा परेको छ नै अतिक्रमणपछिको वस्ती विकासले वस्तीलाई समेत जोखिममा पारिरहेको छ। जोखिमका साथसाथै अतिक्रमणको दर पनि बढिरहेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार शाहले भन्नुुभयो– ‘पातुखोला नाम मात्रै हो, अतिक्रमणले खोलालाई कुलो बनाइसकेको छ।’ वडा नंं. ५ मा मात्रै करीव २२ सय घर टहरा खोला बगरमा बनेको उहा“ले बताउनुुभयो। घरबासबिहीन स“गस“गै गाउ“ छोड्दै शहर छिरेका, द्वन्द्वकालमा विस्थापित परिवारहरु बढी रहेको उहाले बताउनुुभयो।
बगरको वस्तीमा स्थानीय सरकारको विकास
पातुुखोला बगरमा वस्ती बसेको वर्षांै भइसकेको छ। जहा“ अहिले ठूला– ठूला संरचना निर्माणको काम पनि भइरहेका छन्। साना छाप्राहरु पनि देखिन्छन्। वस्ती विकासस“गै पातुखोला बगरमा खानेपानी, पक्की सडक, नाला, विद्युुतलगायतका पूर्वाधार विकासले गति लिइरहेको छ । जसले पातुुखोला बगरलाई अब शहर बनाउनेतर्फ अग्रसर गरिरहेको छ। बगरमा बसोबास गर्दै आइरहेका स्थानीय नवराज ओलीले भन्नुुभयो– ‘बगरमा वस्तीस“गै विकास पनि बढिरहेको छ। विकास र वस्ती सगस“गै बाढीको जोखिम पनि मोल्नुुपर्ने बाध्यता छ।’ अतिक्रमणका कारण खोला सा“घुरो बन्दै गइरहेकाले जोखिम पनि बढ्दै गइरहेको उहा“को भनाइ छ। उहा“ले भन्नुुभयो– ‘कसैको खोला बाहेक केही छैन, कसैका खोलामा पनि, शहरमा पनि छन् गाउ“मा जग्गा छन्।’
पातुखोला सुकुुम्वासी भूमिहीन विपन्नको तुलनामा गाउ“बाट शहर खोज्दै पेशा व्यवसायका लागि आएका विभिन्न व्यक्तिहरुको अतिक्रमणमा परेको स्थानीयहरुको भनाइ छ। स्थानीय नवराज ओलीले भन्नुुभयो– ‘खोला छेउमै सुुकुुम्वासीहरु बस्छन्, खोलाको बाहिर जग्गामा पेशा व्यवसाय गर्ने मान्छेका घर छन्।’ जसका कारण खोलामा अतिक्रमण नहुुने भन्दा पनि हुुनेहरुले गरिरहेका छन्।
पातुखोला बगर अतिक्रमणस“गै किनबेच पनि हुुने गरेको छ। पातुुखोला बगरमा कसैले घडेरी त कसैले घर नै बेच्छन्। जसको हातमा कसैको लालपूर्जा छैन। अतिक्रमणको नाममा खोला नै किनबेचको दर बढ्दै गइरहेको छ। शुरुमा जग्गा रोक्ने, जग्गा रोकेपछि टहरा निर्माण गर्ने, टहरा र जग्गाको मूल्यमा केही प्रतिशत नाफामा जग्गा किनबेच हुने गरेको एक स्थानीयको भनाइ छ। उनका अनुसार गाउ“मा घर भएकाले सस्तोमा जग्गा किने, मंहगोमा ऐलानी जग्गा बेच्ने प्रवृत्ति पातुखोलाले खेप्नुु परिरहेको छ।
घरबास नभएकाहरुले बसोबास गर्दै आइरहे पनि अन्यत्र घरबास भएकाले पातुुखोलामा व्यापार गरिरहेको उनको भनाइ छ। जसले गर्दा पातुुखोला व्यापारीहरुको हातमा परिसकेको उनको भनाइ छ। तुलसीपुर निवासी नागरिक अगुुवा टीकाराम रेग्मीले खोलासगै पातुुखोलामा गुठी र सरकारी जग्गा समेत अतिक्रमणमा परेका छन्। तर स्थानीय सरकारको यसप्रति कुनै चासो नभएको बताउनुभयो।
सुुकुम्वासीको नाममा हुुकुम्वासीको रजाइ
पातुुखोला बगरमा सुुकुुम्वासीका नाममा हुुकुम्वासीहरुले राज गरिरहेको जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चको भनाइ छ। शान्ति स्थापनास“गै पातुुखोलामा सुुकुुम्वासी बसोबास गर्ने थाले पनि अहिले आर्थिक प्रलोभनका कारण सुकुुम्वासी विस्थापित हुुने र हुुकुुम्वासीले कमाइ खाने थलोका रुपमा पातुुखोला परिचित बनिरहेको मञ्चका अध्यक्ष देउमन दमाइको भनाइ छ। उहा“ले भन्नुुभयो– ‘सुकुुम्वासीले खोला अतिक्रमण गरे भन्ने छ तर त्यहा“ बास्तविक सुुकुुम्वासी भन्दा हुुकुुम्वासीको बसोबास र अतिक्रमण बढी छ।’ जसलाई स्थानीय तहले नियमन गरी वास्तविक सुकुुम्वासी र भूमिहीनको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।
जोखिम मोल्दै वास्तविक पीडित
पातुुखोला क्षेत्र ठूलो रहे पनि जहा“ सुरक्षित छ त्यहा“ अरुले नै अतिक्रमण गरी बसेका छन्। जहा“ खोलाको छेउमा छन त्यहा“ छाप्रोमा सुकुुम्वासीहरु बस्छन्। सुुकुुम्वासीको टहरोमा कहिले बाढी बस्ने हो थाहा छैन। तर सुुकुुम्वासीका नाममा बसिरहेका हुुकुुम्वासीहरुका दुुईतीन तले घर छन्। जुुन पहिले बसेका हुुन ती खोलाको बगर होइन बीच खोलामा बसेका छन्। जसका कारण बाढीको उच्च जोखिम मोल्दै सुुकुुम्वासीहरु बस्दै आइरहेकाले स्थानीय सरकारले जोखिममा परेकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
खोला सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइ“दैन ः मेयर
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुुख घनश्याम पाण्डेले खोला र सरकारी जग्गा कसैले पनि अतिक्रमण गर्न नपाइने बताउनुुभयो। अतिक्रमणको चपेटाले पातुुखोला सा“घुुरो बन्दै गइरहेकाले पातुखोलालाई अतिक्रमणबाट जोगाउनुुपर्ने बताउनुुभयो। पातुुखोला २०५०÷५२ देखि नै अतिक्रमणमा परेकाले घना वस्ती विकास भइसकेको उहा“को भनाइ छ। उहा“ले भन्नुुभयो– ‘खोला र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइ“दैन तर वर्षाैअघि भइसकेकाले व्यवस्थापन गर्न पनि अलि केही अप्ठेरो देखिन्छ। तर वास्तविक सुकुुम्वासीहरुको हकमा उपमहानगरपालिकाले निवदेन दिए व्यवस्थापन गर्नेछ।’ तुलसीपुर बजारको एउटा सुन्दरता पातुखोला पनि हो। त चरम अतिक्रमणले खोलास“गै बजार पनि कुरुप देखाइरहेको छ।
Previous: पुख्र्यौली कला झल्काउन निगालोको प्रयोग
Next: अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस:सीपमूलक शिक्षा नीति ल्याउन सुझाव